Warbixin: Isbedelka ku dhacay qaar kamid ah goobihii Taariikhiga ahaa ee Xamarweyne | Baydhabo Online
Suuqa degmada Xamarweyne ee Gobolka Banaadir wuxuu ka mid yahay suuqyada ugu caansan ee ku yaala magaalada muqdisho, waxaana degmada Xamarweyne ku yaala goobo Taariikhi ah oo qeyb weyn ka qaadan jiray xilliyadii hore horumarka caasimada, sida suuqa weyn oo lagu iibin jiray dahabka noocyadiisa kala duwan waxaana looga kala soo iib tagi jiray dalalka dariska la ah Soomaaliaya.
Wuxuuna ka mid ahaa suuqaasi oo loo yaqaano Dahablaha suuqyada lagu iibiyo Dahabka noocyadiisa kala duwan ee dalka oo can uu ku ahaa,balse mudadii dalka uu burbursanaa waxaa uu ahaa mid aan shaqeynin kadib saameyntii ka dhalatay colaadahaasi,waana suuq ahmiyad u lahaa ka qeyb qaadashada kobaca dhaqaale ee dalka.
Suuqii Dahablaha ayaa haatan wuxuu u shaqeeyaa qaabab kale oo ah in ay kuyaalaan dukaamo kala duwan oo lagu iibiyo Dharka iyo noocyo kale oo adeegyo ganacsi,waxaana dib loo howlgeliyay sanadihii ugu dambeeyey,maadaama uu ahaa suuq ahmiyadiisa leh.
Dhismahan waxaa loo yaqaanaa sar Gaduuda,waxa uu ku yaalaa suuqa degmada Xamarweyne,hadda waxaa ka socdo dib u dhis uu ku sameyno maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya maamulka,waxa sidoo kale jiray xarumo kale oo dowli ahaa oo taariikhi ahaa,kuwaasi oo haatan la qorsheynayo in dib u dhis lagu sameeyo si loo soo celiyo bilicdii caasimadda,si ay dib ugu soo laabato bilicdii ay caasimaddu lahaan jirtay.
Goobaha kale ee caanka ahaa oo degmada kuyaalay waxaa kamid ahaa Barxadda loo yaqaano Yaasiin,halkaasi oo ahaan jirtay Boosteejo laga raro gaadiidka dadweynaha oo ka kala shaqeyn jiray degmooyinka Muqdisho,balse haatan arrinku waa mid ka duwan sidii hore,waxaana halkaasi kuyaala suuq ballaaran oo lagu iibiyo nuucyada kala duwan ee Qudaarta,bagaashka iyo alaabo kale.
Waxaa halkaasi ku arkaysaa dukaamo yer yer oo isku dhow dhow,sidoo kale dad kale oo ka xamaasha alaabta la saaro gaari gacanada ayaa hor fadhiya,taasina waxaa ay mararka qaar keentaay ciriiri farabadan oo sababki karta in loo gurman wayo hadii musiibo ay dhacdo.
Qaar ka mid ah ganacsatadii ka ganacsan jiray suuqii hore dahablaha oo uu ka muuqdo bur bur aad u baahsan ayaa ka codsanaya maamulka gobolka Banaadir in uu ka shaqeeyo sidii goobahaasi iyo goobo kale oo ka mid ahaa goobihii wax ku oolka ahaa ee xiliyadii hore dib loogu soo celiyo sidii ay ahaan jireen.
Caaqil Maxamed Bin Cali uun-sane oo ka mid ah odayaashii waaya jooga haa taariikh ahaan suuqii hore ee Dahablaha Soomaaliya iyo Barxadda Yaasiin dhismaha sar Gaduudda loo yaqaano ayaa ka sheekeynaya wax ay ahaayeen goobahaasi iyo wax yaabaha lagu rajo weynyahay in wax laga bedelo.
“Waxaa halkan ay aheyd xilligii hore Barxad laga raro gaadiidka dadweynaha,waxaana loo aqoonjiray Barxadda Yaasiin ,goobtaana waxey ahey suuqa ugu weyn ee lagu iibiyo Dahabka marka waxaan ka codsaneynaa Dowlada Soomaliya in ay soo celiso goobahii hore ee adeegyada bulshada lagu hormarin jiray”. Ayuu yiri Caaqli Maxamed.
Caaqil Maxamed bin Cali uunsane oo ka mid ah odayaashii oo u soo joogay Taariikh ahaan ayaa sidoo kale ka codsaday Dowladda Soomaaliya ,maamulka Gobolka Banaadir iyo kan degmada Xamarweyne in ay ka shaqeeyaan sidii loogu soo celin lahaa gobahaasi sidoodii hore si ay u hagaagto bilicda caasimadda Muqdisho.